Iindlela ezi-3 zokuSebenza ngokuKhuphela ngokuSebenzayo | Martech Zone
NgoLwesithathu, Matshi 23, 2011 NgoLwesine, Septemba 19, 2013
Ikopi elungileyo yinto ehlekisayo. Kunzima ngendlela emangalisayo ukwenza kodwa kulula ukwetyisa. Ukubhala ngokuchanekileyo kulula, kuyancokola, kusengqiqweni kwaye kulula ukufundwa. Kuya kufuneka ibambe ubume kunye nomoya wemveliso, inkonzo okanye umbutho, ngelixa uqhagamshela ngqo nomfundi.
Umsebenzi womshicileli unzima. Okokuqala, kuya kufuneka uyophule le nto ubhala ngayo ukuya kwinqanaba elisisiseko. Ukubhala ikopi asiyondawo yokubonisa ukuba mangaphi amagama amakhulu owaziyo. Imalunga nokufikelela kwinqanaba nokwandisa ixabiso. Kodwa ayisiyiyo imveliso kuphela.
Ukwazi umthengi linyathelo lokuqala ekubhaleni ikopi esebenzayo.
Isivakalisi sokugqibela sibaluleke kakhulu ndiza kusiphinda. Ukwazi umthengi linyathelo lokuqala ekubhaleni ikopi esebenzayo.
Nokuba ubhala ikopi yentengiso, incwadana yeendaba yenkampani, okanye umnxeba womnxeba omnye osenzweni, umsebenzi wokubhala ikopi kukungena ngaphakathi kwentloko yomfundi. Bungakanani ubude bazo? Balindele ntoni? Imveliso iya kuzisa njani ixabiso kubo? Kutheni le nto befanele ukuhamba nophawu oluthile kunolunye?
Ukwazi abaphulaphuli ekujoliswe kubo kuya kukunceda uqonde ukuba baya kuyisebenzisa njani ikopi. Luhlobo luni lolindelo okanye amava adlulileyo abanayo kwinkampani okanye kwimveliso yokumisa kwakho? Loluphi uhlobo lwesenzo okanye impendulo ozama ukuyicela kubo?
Le yimibuzo embalwa nje yababhali abalungileyo ababuzayo ngaphambi kokuba benze isandi. Okukhona usazi malunga nomfundi ekujoliswe kuye, kulula ukuba ubhenele kumgca ongezantsi. Isandi esiqinileyo senzelwe ukwazisa umfundi ukuba ubenza njani lula ubomi babo.
Ukungena engqondweni yomfundi ofanelekileyo kukunceda uqonde ukuba baya kuyisebenzisa njani imveliso ozama ukuyithengisa. Inqanaba lendlwane lilungelelanisa inowuthi ukuhlangabezana neemfuno zabo. Zininzi iindlela zokufaka imveliso enye, kodwa ababhali abalungileyo bafumana eyona ndlela isebenzayo.
Nanku umzekelo: ndinokubonisa ngokulula iindlela ezine okanye ezintlanu zabathengi abanomdla wokuthenga ilaphu elitsha, kodwa zonke zinxulumene nemveliso ngokwahlukileyo.
I-tech geek inokufuna ukwazi ii-specs zeprosesa, zingaphi izibuko ze-USB, ingakanani idatha enokuyilawula ngokufanelekileyo kwaye luhlobo luni lwesoftware eyayixhasayo.
Umdlali weqonga unomdla kwisantya se-intanethi, umgangatho wevidiyo, ikhadi lesandi, yeyiphi imidlalo ekhoyo kwaye ukuba iyakwazi ukuphatha isilawuli.
Iprojekhthi yeshishini inokuba ikhangela unxibelelwano lwe-wi-fi, ukusetyenziswa ngokulula, ukungqinelana kwamaxwebhu kunye nenkxaso ye-tech.
I-audiophile ikhuphela iingoma ezininzi ngaxeshanye kwaye ifuna ukubanakho ukudlala ilayibrari yakhe yomculo ekhulayo ngenkqubo yestereo yasekhaya.
Ngenxa yokuba sichonge abantu ekujoliswe kubo kunye neemfuno zabo, sinokuqaqambisa imveliso ngeyona ndlela ifanelekileyo yokuhlangabezana nezo mfuno.
Kule mihla ikopi eninzi embi ijolise kuphela ekusebenziseni amagama aphambili. Imigaqo ye-SEO yindawo elungileyo yokuqala, kodwa umbhali olungileyo uluka ngamagama aphambili ngokwemvelo, ngaphandle kokubanyanzela kwiindawo ezingezizo ezabo. Ababhali abangalunganga bayabaxina nje, besenza amagama aphambili abonakale ngathi ngumhlekisi emngcwabeni.
Ngokoluvo lwam, eyona nto ikhutshelweyo ayiziva ngathi ithengisa nzima. Uninzi lwabathengi aluthandi ukubethwa ngaphezulu kwentloko ngesandi. Banxibelelana neemveliso ezihambelana neemfuno kunye neemvakalelo zabo. Kungenxa yoko le nto kubaluleke kakhulu ukwenza umlenze xa kufikwa kuphando lwabaphulaphuli kunye nemveliso.
Ucinga ntoni? Ujonge ntoni ekubhaleni okusebenzayo? Shiya iingcinga zakho kwizimvo ezingezantsi.
I-Disqus: UkuLawula iQela leeNkqubo zokuPhawula